Mawduuc badan, Dhibaatooyin badan: Halganka iibka Rep | Martech Zone
Wax yar ayaan ka daabacnay aaladaha isku waafajinaya dadaalka iibka iyo suuqgeynta. Fikradayda, wakiilada iibka waxay leeyihiin shaqo aad u dhib badan oo la sameeyo maalmahan. 59% waqtigooda waxay qabtaan howlo aan ka aheyn iibinta sida baaritaanka koontada iyo soo saarista raadad. Macaamiisha iyo ganacsataduna waxay awoodaan inay ku sameeyaan cilmi baaris aan caadi ahayn khadka tooska ah, qiimeynta astaamaha, faa'iidooyinka, alaabada, adeegyada, qiimeynta iyo dib u eegista
In kasta oo ay jiraan waxyaabo badan oo suuqgeyn ah oo la heli karo, 40% qalabka suuqgeynta ma isticmaalaan kooxaha wax iibiya. Shirkadaha aan awoodin inay sii wadaan, wakiilada iibka ayaa dib loogu celiyay si ay u amraan kuwa qaadaya iyaga oo aan helin fursad badan oo ay wax ku darsadaan. Shirkadaha ka horreeya qalooca, wakiillada iibka waxay si buuxda ugu hubaysan yihiin dhammaan waxyaabaha ay u baahan yihiin si ay uga caawiyaan helitaanka yoolalka rajada, dhisidda maamulka iyo ku kalsoonaanta iyaga, kuna hagaan iyaga diidmada wareegga go'aan qaadashada.
Tani infographic ka Qvidian socod maalin dhan nolosha iibiyaha casriga ah ee B2B, oo muujinaya caqabadaha ka soo baxa jidka. Dadka wax iibiya ma yaqaaniin goorta iyo sida loo isticmaalo dhamaan waxyaabaha, aaladaha, iyo tababarka aad siisay iyaga si ay u noqdaan lataliyeyaasha aaminka ah ee iibsadayaashu filayaan?
8 ka mid ah 10 iibka iibka ah ayaa dareemaya xaddiga macluumaadka waa inay fiiriyaan, taasoo keentay waqti badan oo ku bixiyay abaabulka iyo falanqaynta xaqiiqooyinka. Awoodda ka jawaab celinta iyo ka jawaab celinta baahiyaha rajada ayaa ka muhiimsan sidii hore… iyo suuqgeyn loo baahan yahay si loo xoojiyo awood iibinta shirkadaha sidaa darteed wakiillada iibka waxay ku siin karaan waxyaabaha saxda ah farriinta ugu habboon isla marka loo baahdo ama la codsado.
Tags: falanqee baahiyahaku dhowdaba-macluumaad dheeraad ahwareysijiilka ledisku hagaajinta suuq geynta iyo iibintawada xaajoodkagorgortankajoogarajadaqvidianwaxyaabaha iibka ahwaxtarka iibkaKordhinta Iibkaiibka iibkaiibiyeService
Sida Looga Dhigo Is-weydaarsi Suuqgeyne Ay Kuu Shaqeyso
iOS iyo Android App Icon Photoshop Templates